Sony Vegas မှာ | October 2019
အဓိက Sony Vegas မှာ
Sony မှဂတ်စ်ကိုသင်ဗီဒီယိုနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်လည်းအသံသွင်းထားနှင့်အတူမသာအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အယ်ဒီတာ၌သင်တို့ကိုဖြတ်တောက်စေနိုင်ပြီးအသံသက်ရောက်မှုကျော် layered ။ "ဂေါက်", သင်စကားသံကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည့်အတူ - ကျနော်တို့အသံဖိုင်သက်ရောက်မှု၏တဦးတည်းစဉ်းစားပါ။ Sony ကဂတ်စ် 1. Load ကို Sony Vegas Pro ကဗီဒီယိုကသို့မဟုတ်သင်စကားသံကိုပြောင်းလဲပစ်ချင်ဘယ်မှာအော်ဒီယိုသီချင်းအတွက်အသံဖြင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို။
Sony က Vegas မှာအရောင်ပြင်ဆင်ခြင်း
Sony က Vegas Pro က, သင်ဗီဒီယို၏အရောင်များချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ အရောင်ဆုံးမခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအတော်လေးမကြာခဏမကောင်းတဲ့ရိုက်ကူးမသာအသုံးပြုသည်။ ဒါကြောင့်နှင့်အတူ, သငျသညျအခြို့စိတ်ဓါတ်များ set နှင့်ရုပ်ပုံကိုပိုပြီးအရည်ရွှမ်းစေနိုင်သည်။ Sony ကဂတ်စ်၏အရောင်ကိုချိန်ညှိဖို့ဘယ်လိုကြည့်ကြပါစို့။ Sony က Vegas မှာ, အရောင်ဆုံးမခြင်းအောင်ဖို့အသုံးပြုနိုင်အဘယ်သူမျှမ tool ကိုလည်းမရှိ။
Sony က Vegas မှာအသံလမ်းကြောင်း Remove
မကြာခဏ Sony က Vegas မှာဗီဒီယိုတစ်ခုအတွက်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်, သငျသညျတစျခုတညျးသောဗီဒီယိုအစိတ်အပိုင်း, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုလုံးကိုပစ္စည်းဖယ်ရှားရေး၏အသံ clean up လုပ်ဖို့ရှိသည်။ သင်တစ်ဦးသည်ဗီဒီယိုကိုဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်ဥပမာ, ထို့နောက်သင်သည်ဗီဒီယိုမှအသံကခြေရာခံဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်ဆိုနီ Vegas မှာတောင်မှဒီထင်ရသောရိုးရှင်းသောအရေးယူမှုကိစ္စများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
Plug-ins ကို Sony Vegas မှာများအတွက်
Sony က Vegas Pro ကစံကိရိယာတစ်ခုကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကထပ်မံတိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်သင်သိရခဲ့ဘူး။ ဤသည် Plug-ins ၏အကူအညီဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကို plugins ကိုနှင့်မည်သို့သည်သူတို့ကိုသုံးစွဲဖို့ကိုကြည့်ကြရအောင်။ တစ်ဦး plugin ကိုကဘာလဲ? plugin - အင်တာနက်ပေါ်ရှိဒီထိုကဲ့သို့သော Sony ကဂတ်စ်အဖြစ်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဆိုအစီအစဉ်အတွက်ဖြည့်စွက် (လုပ်ပိုင်ခွင့်),, ဒါမှမဟုတ်အင်ဂျင်ဆိုက်သည်။
ဗီဒီယိုကိုအသွင်ကူးပြောင်းမှုတစ်ခုတည်းရုပ်ရှင်မျိုးစုံအပိုင်းအစများပေါင်းစပ်ဖို့လိုအပ်နေပါသည်။ သငျသညျဆက်ဆက်ပြုမည်နှင့်တစ်ဦးအကူးအပြောင်းစရာမလိုဘဲကားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအစိတ်အပိုင်းမှချွန်ထက်ခုန်တဲ့ဘက်စုံကဗီဒီယို၏အထင်အမြင်ဖန်တီးမည်မဟုတ်ကြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤအကူးအပြောင်း၏အဓိက function ကိုကိုယ့်မျက်စိကန်းမရှိ, ချောမွေ့တယောက်ကိုတယောက်သည်ဗီဒီယိုအစိတ်အပိုင်းစီးဆင်း၏အထင်အမြင်ပေးပါ။
သငျသညျကို Sony Vegas မှာတစ်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောဗီဒီယိုဖန်တီးချင်လျှင်, သင်အေးမြဆိုးကျိုးများနှင့်တည်းဖြတ်နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဒီနေ့အရှိဆုံးရိုးရှင်းတဲ့နည်းစနစ်များထဲမှဖြစ်စေဘယ်လို Sony က Vegas မှာမြင်ရပါလိမ့်မည် - တစ်ခုတည်းဘောင်အတွက်မျိုးစုံသောဗီဒီယိုများကစား။ ဘယ်လို Sony ကဂတ်စ်ကို Sony Vegas မှာဗီဒီယိုတစ်ကားကိုတစ်ဦးကဗီဒီယိုထည့်ရန် Pro ကိုကျနော်တို့ tool ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်အတွက်တစ်ခုတည်းဘောင်သို့ဗီဒီယိုများစုံတွဲတစ်တွဲထည့်သွင်းရန် "ပန်နှင့်ဖြစ်ရပ်များကိုချုံ့ ... " ( "Event ပန် / သီးနှံ") ။
Sony က Vegas Pro ကဗီဒီယိုဖြတ်တောက်ရန်ကဘယ်လို
သငျသညျလျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုကိုချုံ့ဖို့လိုအပ်လျှင်, Sony က Vegas Pro ကဗီဒီယိုတည်းဖြတ် program ကိုအသုံးပြုပါ။ Sony က Vegas Pro ကဗီဒီယိုတည်းဖြတ်များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်သင်သည်အရည်အသွေးမြင့်သက်ရောက်မှုစတူဒီယိုအဆင့်ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ရိုးရှင်းပြီးမိနစ်ပဲစုံတွဲတစ်တွဲအတွက်ဗီဒီယိုဖြတ်တောက်စေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Sony က Vegas မှာအသံကို attenuation Making
အသံကို attenuation ကဲ့သို့သောတစ်ခုသက်ရောက်သငျသညျအခြို့သောအချက်များစံချိန်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်မြင့်တက်ရဲ့အစမှာနှင့်နွမ်း၏အဆုံးမှာအသံအတိုးအကျယ်အောင်, ဆွေးနွေးမှုများကိုကို select နိုင်အောင်။ Sony က Vegas မှာအကျိုးသက်ရောက်မှု damping အသံကလျှောက်ထားဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားပါ။ Sony က Vegas မှာသံကို၏ကို attenuation အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
Sony က Vegas မှာတစ်ဦးမိတ်ဆက်ခြင်းကိုအောင်လုပ်နည်း
မိတ်ဆက်ခြင်း - သင်သည်သင်၏ဗီဒီယို၏အစဦး၌ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး, ကသင့်ရဲ့ "ချစ်ပ်" ဖြစ်လတံ့သောသေးငယ်တဲ့ရုပ်ရှင်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုယျတျောနှငျ့အတူစတင်သည်ကြောင့်မိတ်ဆက်ခြင်း, တောက်ပခြင်းနှင့်အမှတ်ရစရာဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါမိတ်ဆက်ခြင်းကိုဖန်တီးရန်ကို Sony Vegas မှာသုံးစွဲဖို့ဘယ်လောက်ကိုကြည့်ကြရအောင်။ Sony က Vegas မှာတစ်ဦးမိတ်ဆက်ခြင်းကိုအောင်ဘယ်လိုနေသလဲ? 1. နှင့်အတူစတင်, ကျွန်တော်တို့ကိုစို့ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆက်ခြင်းများအတွက်နောက်ခံ wallpaper ကိုရှာပါ။
Sony က Vegas မှာအဖြစ်ဆူညံသံကိုဖယ်ရှား?
ဆူညံသံအဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ကိုသရဲခြောက်သော: လေတိုက်အခြားလူများ, TV နဲ့ပိုပြီး၏အသံ။ သငျသညျစံချိန်အသံသည်သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုစတူဒီယိုထဲမှာမပါလျှင်ထိုကွောငျ့, ထို့နောက်ဧကန်အမှန်အသင်လမ်းကြောင်းကိုင်တွယ်နှင့်ဆူညံသံဖိနှိပ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ Sony က Vegas Pro က၌ဤလုပ်ဖို့ဘယ်လောက်ကိုကြည့်ကြရအောင်။ စလုပ်ဖို့ကို Sony Vegas မှာ 1. ထဲမှာဆူညံသံဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို, သင်တည်းဖြတ်ချင်သောဗီဒီယို, ယာယီလမ်းသွားထားပါ။
Sony က Vegas မှာဗီဒီယို၏အကို attenuation အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဗီဒီယိုကို install အခါဗီဒီယိုချောမွေ့အသွင်အပြင်နှင့်ပျောက်ဆုံးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးရန်မကြာခဏလိုအပ်ပေသည်။ ဒီသက်ရောက်မှုကိုအရောင်မှိန် (ကို attenuation) ဟုခေါ်သည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်တော်ကို Sony Vegas Pro ကအတွက်ဗီဒီယို၏ကို attenuation အောင်ဘယ်လိုမှာကြည့်ရှုမည်။ Sony က Vegas မှာဗီဒီယို၏အကို attenuation အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ? 1. ပထမဦးစွာသင် process ချင်ကြောင်း, တစ်ဦးကိုဗီဒီယိုအယ်ဒီတာအတွက်ဗီဒီယိုကို download လုပ်ပါ။
Sony ကဂတ်စ်ဘို့ကို Magic Bullet ကိုကြည့်
မှော် Bullet ကြည့်ခြင်း - အရောင်ဆုံးမခြင်း plug-in ကို Sony ကဂတ်စ်များအတွက်, သငျသညျကြိုက်သလောက် prompt ကို Style ဗီဒီယိုကိုခွင့်ပြု: အဟောင်းရုပ်ရှင်ရုပ်ပုံအမြင် add အကွာအဝေးကိုပြောင်းလဲရန်, ထွန်းတောက်ပုံရိပ်တွေလည်းမှိုင်း, အပြန်အလှန်, အရောင်များကိုပိုမိုပြည့်အောင်, ဒါမှမဟုတ်။ built-in filter များအရေအတွက်ချမ်းသာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပြီး, တင်းပလိတ်များသက်ရောက်မှုနှင့်အတူအလုပ်ရိုးရှင်း setting ကိုလက်စသတ်။
Sony က Vegas မှာဗီဒီယိုကဆပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဒါဟာဗီဒီယိုကိုချွေတာတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်သောအရာကိုပြဿနာများ, ပုံပဲ: ခလုတ်ကိုနှိပ် "Save" ကိုသငျတို့လုပ်ပြီးသွားပြီ! သို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှ, Sony က Vegas မှာဒါရိုးရှင်းမရှိ, ဒါကြောင့်လူအများစုကသဘာဝဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပေါ်ပေါက်နေသောခေါင်းစဉ်: "Sony က Vegas Pro ကအတွက်ဗီဒီယိုကယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?" ။ ကြည့်ကြပါစို့ သတိပေးခြင်း!
သင်တန်း၏ဗီဒီယိုနှစ်ဖက်စလုံးပေါ်တွင်အနက်ရောင်ဘား, Remove, အဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများအတွက်လည်းခက်ခဲသည်မဟုတ်။ သာမန်အသုံးပြုသူများအကိုလည်းတစ်ခုလုံးကို screen ပေါ်မှာပြသကြောင်းဒါကြောင့်ခက်ခဲဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ရန်ကိုရှာဖွေလေ့ရှိပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျနော်တို့နှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်အနက်ရောင်ဘားနှင့်အတူသူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်သင်မည်သို့ပြပါလိမ့်မယ်။
Sony မှဂတ်စ်ကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
သငျသညျကို Sony Vegas မှာတပ်ဆင်ရန်ခက်ခဲ Pro ထင်လျှင်, သင်မှားယွင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ရိုးရှင်းပေမယ့်, ငါတို့ခြေလှမ်းတွေကဒီအံ့သြစရာကိုဗီဒီယိုအယ်ဒီတာ install ဖို့ဘယ်လိုအားလုံးအတူတူပင်ကိုဖော်ပြရန်ဘယ်မှာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်, ရေးသားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ Sony က Vegas Pro က 13 install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? 1. ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာတစ်ဦးပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အတူအဓိကဆောင်းပါးဖို့အောက်က link ကို click နှိပ်ပြီး, ကိုစတင်ရန်။
ပိုကောင်းတဲ့အရာဟူမူကား, Adobe ကပရီးမီးယားလိဂ် Pro ကိုသို့မဟုတ် Sony က Vegas Pro က?
ပိုကောင်းတဲ့အရာ၏မေးခွန်းကို: Sony က Vegas Pro ကသို့မဟုတ် Adobe ကပရီးမီးယားလိဂ် Pro ကို - လူအတော်များများသည်အသုံးပြုသူများမှအကျိုးစီးပွား။ ဤဆောင်းပါး၌, ကျနော်တို့အဓိက parameters များကိုဤနှစ်ခုသည်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာနှိုင်းယှဉ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ထိုသို့တစ်ခုတည်းကိုသာဤဆောင်းပါးကိုအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးကဗီဒီယိုအယ်ဒီတာ, ရွေးချယ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ထိုအ Adobe ကပရီးမီးယားလိဂ်နှင့် Pro ကို Sony ကဂတ်စ်အသုံးပြုသူအတွက် interface ကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အ interface ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
Sony က Vegas မှာအဖွင့်ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများအတွက်အမှားအယွင်းများအလျောက်
Sony ကဂတ်စ် - တော်တော် cranky ကဗီဒီယိုအယ်ဒီတာ, ဤအမှားနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဖြစ်ကောင်းသည်အခြား: "ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများကိုဖွင့်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုဖိုင်တွေမှားယွင်းနေသည်ဖွင့်လှစ်နေစဉ်မှားယွင်းမှုတစ်ခုသတိပေးဖြစ်ပွားခဲ့သည် .. !" ဤဆောင်းပါး၌အကြှနျုပျတို့သညျတခါနှင့်အလုံးစုံတို့အဘို့ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းကူညီနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: အဘယ်ကြောင့် Sony ကဂတ်စ် * format ကိုဖွင့်လှစ်မထားဘူး။
Sony က Vegas မှာဗီဒီယိုရောက်စေဖို့ကိုဘယ်လို
မကြာခဏကဆိုသည်ဗီဒီယိုအစိတ်အပိုင်းအာရုံစိုက်၎င်း၏ပိုမိုနီးကပ်စွာနှင့်မြေတပြင်လုံးကိုမျက်နှာပြင်ကိုပြသရန်လိုအပ်သောအခါ။ သင်တို့သည်လည်း Sony ကဂတ်စ်ကိုအသုံးပြုပြီးဗီဒီယိုအပိုင်းအစကိုကျယ်စေနိုင်ပါတယ်။ ရဲ့ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုတွေ့မြင်ကြကုန်အံ့။ Sony က Vegas မှာဗီဒီယိုရောက်စေဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? 1. Load ကို Sony Vegas မှာဗီဒီယိုကငျသညျကို process နဲ့ click လုပ်သည့်အပေါ်ချင်တယ် "ပန်နှင့်ဖြစ်ရပ်များကိုချုံ့ ... " ။
အရှိန်မြှင့်သို့မဟုတ် Sony က Vegas မှာဗီဒီယိုနှေးကွေးလုပ်နည်း
သင် installation ကိုအသစ်ဖြစ်ကြပြီးရုံအစွမ်းထက်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ် Sony က Vegas Pro ကနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရ စတင်. နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်ဧကန်အမှန်အသင်သည်ဗီဒီယို၏ပြန်ကျော့မြန်နှုန်းကိုပြောင်းလဲဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုမဆိုမေးခွန်းများကိုရှိသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်တော်တစ်ဦးအပြည့်အဝနှင့်အသေးစိတ်တုံ့ပြန်မှုပေးဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကို Sony Vegas မှာအရှိန်မြှသို့မဟုတ်နှေးပြကွက်ဗွီဒီယိုကိုရနိုင်သောနည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။
Sony က Vegas မှာခေါင်းစဉ်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Sony က Vegas Pro ကစာသားကိုအတူလုပ်ကိုင်မှုအတွက်ကိရိယာအတော်များများရှိပါတယ်။ ထိုကွောငျ့, သငျသညျ, အဆင်းလှခြင်းနှင့်ရောင်စုံစာသားမဖန်တီးသူတို့ကိုသက်ရောက်မှုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာအတွင်းတိုက်ရိုက်ကာတွန်းထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ရဲ့ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုတွေ့မြင်ကြကုန်အံ့။ သင်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သောဗီဒီယိုဖိုင်အယ်ဒီတာ, ဒေါင်းလုပ်လုပ်, စာတန်းများ 1. ပထမဦးစွာထည့်သွင်းရန်။
https://termotools.com my.termotools.com © Sony Vegas မှာ 2019